Umzi mveliso weGloves anokulahlwa -iTshayina abaThengisi beGloves abaSebenzisa, abaThengisi
Iigloves eziQhelekileyo zeNitrile
I-100% ye-nitrile yerabha ayizukubangela ukuba allerbiye kulusu lomntu. Ngaphezulu amandla okulwa ne-punct, amandla okungena kwi-anti-bacteria kunye nokukwazi ukumelana nemichiza. Ukunxiba okude, indawo ethe tyaba, ukusebenza ngakumbi. Ukuthamba kwaye ukhululekile ukunxiba. Ii-tapuff cuffs zilula ukunxiba nokusebenza. Ifunyenwe isiqinisekiso se-EU ye-EU kunye nesatifikethi se-FDA yase-US Ifunyenwe i-European Union EN-374 isiqinisekiso sokumelana nemichiza sifunyenwe I-US CHEMO (anti-Cancer Chemotherapy Drug Contact Security Security) ...